Somaliland Archives - Page 6 of 7 - Puntland Mirror Believable Media Website
November 16, 2017 Puntland Mirror 0
Hargeysa-(Puntland Mirror) Xisbiga Wadani ee Somaliland ayaa sheegay in ay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen Guddiga Doorashooyinka Somaliland. Shir jaraaid oo maanta oo Khamiis ah ay masuuliyiin katirsan Wadani ku qabteen magaalada Hargeysa, ayay […]
November 14, 2017 Puntland Mirror 0
Hargeysa-(Puntland Mirror) Tirinta codadka ayaa ka socota Somaliland kadib markii shalay oo Isniin ahayd ay qabsoontay doorashada madaxtinimada. Saddex musharax ayaa u tartamaya in ay badalaan madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud “Siilaanyo”, oo xafiiska qabtay sanadkii […]
November 13, 2017 Puntland Mirror 0
Hargeysa-(Puntland Mirror) Dadka reer Somaliland ayaa saakay u dareeray goobaha cod bixinta si ay u doortaan madaxweynahooda shanta sanno ee soo socota. Ku dhawaad 700,000 qof oo ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo Isniin ah, waxaana […]
November 12, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa suurtagal tahay in ku dagaalamaan gudaha gobolka Sanaag, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Dadka deegaanka ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in labada ciidan ee Puntland iyo Somaliland […]
November 11, 2017 Puntland Mirror 0
New York-(Puntland Mirror) Haayada Xuquuqda Aadanaha ee Human Rights Watch ayaa walaac ka muujisay go’aanka ay maamulka Somaliland ku xanibayaan warbaahinta bulshada inta ay socdaan maalmaha doorashooyinka madaxtinimada. “Masuuliyiinta Somaliland waa inay aqoonsadaan doorka muhiimka ah ee […]
Ku dhawaad boqol maleeshiyo Al-Shabaab ah oo tagay deegaanada miyiga ah ee hoostaga magaalada Ceerigaabo
June 30, 2017 Puntland Mirror 0
Garowe-(Puntland Mirror) Ku dhawaad boqol maleeshiyo Al-Shabaab ah ayaa tagay deegaanada miyiga ah ee hoostaga magaalada Ceerigaabo ee waqooyi-bari gobolka Sanaag, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Maleeshiyada ayaa halkaas tagtay intii lagu guda jiray maalmihii […]
Hargeysa-(Puntland Mirror) Somaliland iyo Khaatumo ayaa maanta oo Sabti ah heshiis ku kala saxiixday gudaha magaalada Hargeysa. Qodobada lagu heshiiyay ayaa ahaa sidaan: Somaliland iyo Khaatumo in ay ku dedaalaan sidii afgarad buuxa loo wada […]
April 8, 2017 Puntland Mirror 0
Hargeysa-(Puntland Mirror) Maxkamad kutaala magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ayaa maanta oo Sabti ah labbo sanno oo xabsi ah ku riday wariyaha arrimaha insaanimada ka shaqeeya ee Cabdimaalik Muuse Cooldoon. Xeer-ilaalinta maamulka Somaliland ayaa wariyaha […]